विश्व एड्स दिन सबै दुनिया मा हरेक वर्ष मनाइन्छ 1सेन्ट डिसेम्बर एड्स बारेमा सार्वजनिक जागरूकता जुटाउने (प्राप्त Immuno कमी सिंड्रोम). एड्स मानव इम्यूनो भाइरस को संक्रमण कारण कारण एक महामारी रोग छ (एचआईभी). दिन सरकार संगठनहरूले मनाइन्छ, एनजीओ, नागरिक समाज र अन्य स्वास्थ्य अधिकारीहरूले एड्स सम्बन्धित बोलीहरू वा चर्चा आयोजना द्वारा.
संयुक्त राज्य अमेरिका को राष्ट्रपति वर्ष मा विश्व एड्स दिवस लागि आधिकारिक घोषणा घोषणा 1995 जो सबै दुनिया भर अन्य देशहरूमा द्वारा निम्न सुरु गरिएको थियो. कुनै न कुनै अनुमान अनुसार, वरिपरि 25 लाख मान्छे देखि मृत्यु 1981 गर्न 2007 किनभने एचआईभी संक्रमण. पनि धेरै ठाउँमा एन्टिरिट्रोभाइरल उपचार को पहुँच पछि, वरिपरि2लाख मान्छे (कमसेकम 270,000 कुल थिए बच्चाहरु को) मा 2007 यो महामारी रोग संक्रमित थिए.
विश्व एड्स दिवस उत्सव स्वास्थ्य दिनमा पहिचान अन्तर्राष्ट्रीय उत्सव भएको छ. विश्व एड्स दिवस उत्सव मान्छे बीच जागरूकता वृद्धि गर्न स्वास्थ्य संगठनका लागि प्रमुख मौका प्रदान गर्दछ, उपचार गर्न भन्दा सम्भव पहुँच साथै निवारक उपाय छलफल.
वर्ल्ड एड्स DAY 2017
विश्व एड्स दिवस 2017 शुक्रवार मा मनाइन्छ हुनेछ, मा 1सेन्ट डिसेम्बर.
वर्ल्ड एड्स DAY इतिहास
विश्व एड्स दिवस पहिले थोमस Netter र जेम्स डब्ल्यू द्वारा भिजुएलाइज्ड थियो. मा अगस्ट को महिना मा Bunn 1987. थोमस Netter र जेम्स डब्ल्यू. Bunn दुवै कसले मा एड्स विश्व कार्यक्रमको लागि सार्वजनिक जानकारी अधिकारीहरू छन् (विश्व स्वास्थ्य संगठन) जेनेभा मा, स्विट्जरल्याण्ड. तिनीहरूले डा गर्न एड्स दिन आफ्ना विचार साझेदारी थियो. जोनाथन Mann (एड्स विश्व कार्यक्रम को निर्देशक), जो विचार स्वीकृत र विश्व एड्स दिवस उत्सव सिफारिस गरेको थियो 1सेन्ट वर्ष डिसेम्बर को 1988.
विश्व एड्स दिवस उत्सव तिनीहरूलाई द्वारा निर्णय थियो हरेक वर्ष मनाइन्छ गर्न मा 1सेन्ट डिसेम्बर सही. तिनीहरूले यो चुनाव समय टाढा निर्णय गर्नुपर्छ भनेर लाग्यो, क्रिसमस बिदा वा अन्य बिदा. यो मान्छे र समाचार मिडिया थप चासो र ध्यान गर्न सक्छ जब सबै दुनिया भर समाचार प्रसारण समय समयमा मनाइन्छ गर्नुपर्छ.
एचआईभी / एड्स मा संयुक्त संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, पनि यूएनएड्स रूपमा ज्ञात, वर्ष मा प्रभाव आयो 1996 र विश्वव्यापी प्रचार सुरु. को सट्टा मात्र एक दिनको लागि मनाइन्छ भइरहेको, विश्व एड्स अभियान वर्ष मा यूएनएड्स द्वारा शुरू भएको थियो 1997 एड्स कार्यक्रम ध्यान केन्द्रित गर्न, राम्रो संचार, रोग रोकथाम र रोग जागरूकता पुरा वर्ष को लागि सिक्दै.
सुरु वर्ष मा, विश्व एड्स दिवस विषयवस्तुहरू मात्र बच्चाहरु साथै युवाहरूलाई केन्द्रित थिए, जो कुनै पनि उमेर समूहका कुनै पनि व्यक्ति एचआईभी संक्रमित गर्न सकिन्छ रूपमा पछि परिवार रोग रूपमा मान्यता थियो. देखि 2007, विश्व एड्स दिवस व्हाइट हाउस द्वारा एड्स रिबन को एक प्रतिष्ठित प्रदर्शन द्वारा symbolizing सुरु गरिएको थियो.
वर्ल्ड एड्स DAY विषयवस्तु
यूएनएड्स रोग बारे राम्रो वैश्विक जागरूकता लागि विशेष वार्षिक विषयवस्तुहरू संग मनाइन्छ गर्न विश्व एड्स दिवस अभियान आयोजना सुरु. विश्व एड्स दिवस को सबै वर्ष बुद्धिमानी विषयवस्तुहरू सूची निम्न छन्:
वर्ष को विषय 1988 विश्व एड्स दिवस अभियान को लागि थियो, "संचार".
वर्ष को विषय 1989 विश्व एड्स दिवस अभियान को लागि थियो, "युवा".
वर्ष को विषय 1990 विश्व एड्स दिवस अभियान को लागि थियो, "महिला र एड्स".
वर्ष को विषय 1991 विश्व एड्स दिवस अभियान को लागि थियो, "चुनौती साझेदारी".
वर्ष को विषय 1992 विश्व एड्स दिवस अभियान को लागि थियो, "सामुदायिक प्रतिबद्धता".
वर्ष को विषय 1993 विश्व एड्स दिवस अभियान को लागि थियो, "अधिनियम".
वर्ष को विषय 1994 विश्व एड्स दिवस अभियान को लागि थियो, "एड्स र परिवार".
वर्ष को विषय 1995 विश्व एड्स दिवस अभियान को लागि थियो, "साझा अधिकार, साझा Responsibilities ".
वर्ष को विषय 1996 विश्व एड्स दिवस अभियान को लागि थियो, "एक विश्व र एक आशा".
वर्ष को विषय 1997 विश्व एड्स दिवस अभियान को लागि थियो, "बच्चाहरु एड्स एउटा विश्व बाँचिरहेका".
वर्ष को विषय 1998 विश्व एड्स दिवस अभियान को लागि थियो, "परिवर्तन को लागि बल: युवा मान्छे संग विश्व एड्स अभियान ".
वर्ष को विषय 1999 विश्व एड्स दिवस अभियान को लागि थियो, "सुन्नुहोस्, सिक्न, प्रत्यक्ष: संग बच्चाहरु र युवा मान्छे विश्व एड्स अभियान ".
वर्ष को विषय 2000 विश्व एड्स दिवस अभियान को लागि थियो, "एड्स: मानिसहरू एक फर्क ".
वर्ष को विषय 2001 विश्व एड्स दिवस अभियान को लागि थियो, "मलाई मतलब छ. के तिमी"?
वर्ष को विषय 2002 विश्व एड्स दिवस अभियान को लागि थियो, "Stigma र भेदभाव".
वर्ष को विषय 2003 विश्व एड्स दिवस अभियान को लागि थियो, "Stigma र भेदभाव".
वर्ष को विषय 2004 विश्व एड्स दिवस अभियान को लागि थियो, "महिला, बालिका, एचआईभी र एड्स ".
वर्ष को विषय 2005 विश्व एड्स दिवस अभियान को लागि थियो, "एड्स बन्द: प्रतिज्ञालाई "राख्न.
वर्ष को विषय 2006 विश्व एड्स दिवस अभियान को लागि थियो, "एड्स बन्द: प्रतिज्ञालाई-उत्तरदायित्व "राख्न.
वर्ष को विषय 2007 विश्व एड्स दिवस अभियान को लागि थियो, "एड्स बन्द: प्रतिज्ञालाई राख्न- नेतृत्व ".
वर्ष को विषय 2008 विश्व एड्स दिवस अभियान को लागि थियो, "एड्स बन्द: को राख्न बाचा-नेतृत्व-बल-जोगाउने ".
वर्ष को विषय 2009 विश्व एड्स दिवस अभियान को लागि थियो, "विश्वव्यापी पहुँच र मानव अधिकार".
वर्ष को विषय 2010 विश्व एड्स दिवस अभियान को लागि थियो, "विश्वव्यापी पहुँच र मानव अधिकार".
वर्ष देखि विषय 2011 गर्न 2015 विश्व एड्स दिवस अभियान को लागि थियो, "शून्य प्राप्त: शून्य नयाँ एचआईभी संक्रमण. शून्य भेदभाव. शून्य एड्स सम्बन्धित मृत्यु "
वर्ल्ड एड्स DAY गतिविधिहरू
गतिविधिहरूको विविधता जागरूकता विशेष वर्ष को विषय सन्देश वृद्धि र वितरण गर्ने विश्व एड्स दिन उत्सव दिन सकिन्छ. तिनीहरूले कार्यक्रम को मुख्य लक्ष्य हो रूपमा मान्छे बीच जागरूकता वृद्धि गर्न धेरै आवश्यक छ. गतिविधिहरु केही तल लेखिएका छन्:
समुदायमा आधारित व्यक्तिहरूलाई र संगठन विश्व एड्स दिवस गतिविधिहरु योजना सम्पर्क गर्नुपर्छ, एक योजना बैठक संगठित. यो राम्रो तरिकाले स्थानीय क्लिनिक बाट सुरु गर्न सकिन्छ, अस्पताल, सामाजिक सेवा एजेन्सीहरू, विद्यालय, एड्स वकालत समूह र आदि.
स्वतन्त्र घटनाहरू एक एकल घटना वा अनुक्रम को मंच मार्फत वक्ता र exhibitors अझ राम्रो जागरूकता लागि निर्धारण गर्न सकिँदैन, rallies, स्वास्थ्य मेला, समुदाय घटनाहरू, विश्वास सेवाहरू, parades, ब्लक दल र आदि.
एक सार्वजनिक कथन एजेन्सी बोर्ड विश्व एड्स दिवस लागि पहिचान पहिचान पेश गर्न सकिन्छ.
रातो रिबन लगाएका वा विद्यालय गर्न आशा चिनो अरूलाई वितरण गर्नुपर्छ, काम साइटहरू वा समुदाय समूह. विद्युतीय रिबन पनि सामाजिक मिडिया आउटलेट वितरण गर्न सकिन्छ.
सबै गतिविधिहरु (डीभिडी प्रदर्शनहरू र एड्स रोकथाम सेमिनार जस्तै) कारोबार, विद्यालय, स्वास्थ्य हेरविचार संगठनों, पादरी र स्थानीय एजेन्सीहरूले आफ्नो ठूलो कामको लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ.
एक मोमबत्ती vigil सार्वजनिक पार्क वा निकटतम जहाँ गायक एजेन्सी मा आयोजित गर्न सकिन्छ, संगीतकार, डान्सरहरू, कवि, कथा tellers र आदि Entertaining प्रदर्शन मार्फत एड्स रोकथाम सन्देश वितरण गर्न सक्छ.
विश्व एड्स दिवस जानकारी तपाईंको एजेन्सी को वेब साइटमा यो लिङ्क गरेर वितरण गर्न सकिन्छ.
सबै योजना घटनाहरू र गतिविधिहरु पहिले नै ई-मेल मार्फत वितरण गर्नुपर्छ, समाचारपत्र, मेलिंग वा विद्युतीय बुलेटिनहरु.
मानिसहरू प्रदर्शनियों प्रदर्शन गरेर सचेत हुन सक्छ, पोस्टर, भिडियो, फ्लायरहरू, एचआईभी / एड्स र आदि को लागि पुस्तिका.
विश्व एड्स दिवस गतिविधिहरु तत्काल ब्लग मार्फत मानिसहरूको ठूलो समूह जानकारी सकिन्छ, फेसबुक, Twitter वा अन्य सामाजिक मिडिया वेबसाइट मार्फत.
विश्व एड्स दिवस मना अन्य समूहमा सक्रिय योगदान.
एक मोमबत्ती उत्सव कारण एचआईभी / एड्स गर्न मृत्यु व्यक्ति को स्मृति मा आयोजित गर्न सकिन्छ.
धार्मिक नेताहरूले एड्स घृणाको र अनादर लागि केहि बोल्न प्रोत्साहन दिइएको छ.
एक सेवा भोजन प्रदान गर्न सुरु गर्न सकिन्छ, आश्रय, यातायात, एचआईभी / एड्स संग मान्छे को लागि संगत. तिनीहरूले पनि सामाजिक काम मा निमन्त्रणा गर्न सकिन्छ, उपासना वा अन्य कार्यहरु आफ्नो नैतिकता वृद्धि गर्न.
साथै पढ्नुहोस्: Groundhog DAY 2017 उद्धरण, तस्बिरहरू, SLOGANS, WIKI, छाया
वर्ल्ड एड्स दिनको उद्देश्य 2017
विश्व एड्स दिवस उत्सव उद्देश्य हरेक वर्ष राम्रो नयाँ र प्रभावकारी नीति र कार्यक्रम निर्माण गर्न सदस्य राज्य समर्थन, स्वास्थ्य प्रणाली बलियो बनाउन साथै एचआईभी / एड्स तिर स्वास्थ्य क्षेत्रहरु को क्षमता वृद्धि गर्न. विश्व एड्स दिवस को मुख्य उद्देश्य केही तल दिइएका छन्:
विश्वव्यापी एचआईभी / एड्स लागि रोकथाम र नियन्त्रण उपाय वृद्धि लागि सदस्य अमेरिका मार्गदर्शन गर्न.
रोकथाम लागि योजना लागू लागि सदस्य अमेरिका एक प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्न, एचआईभी / एड्स लागि उपचार परीक्षण सहित रूपमा साथै हेरचाह, बच्चा गर्न संक्रमण दिइरहनुभएको लागि आमा को परामर्श, एसटीआई नियन्त्रण र एन्टिरिट्रोभाइरल उपचार.
को एन्टिरिट्रोभाइरल औषधी वा अन्य वस्तुहरु बारेमा सचेत मान्छे एचआईभी / एड्स विरुद्ध लड्न तिनीहरूलाई मदत गर्न सक्छ जो.
सबैभन्दा प्रभावकारी परिणाम प्राप्त लागि अभियान मा साथीहरूको समूह समावेश गर्न.
स्कूलहरु बढी विद्यार्थी प्रोत्साहन, विश्वविद्यालय र सामाजिक संरचना एड्स लागि संगठित प्रतियोगिताहरु मा योगदान.
साथै संक्रमित एचआईभी / एड्स द्वारा कंडोम लागि साथीहरूको समूह प्रोत्साहन रूपमा विरामीहरु को संख्या कम र नियन्त्रण गर्न.
वर्ल्ड एड्स DAY SLOGANS, उद्धरण र सन्देशहरू (विश्व एड्स DAY 2017)
"एचआईभी / एड्स कुनै सीमा छ".
"मेरो प्ले सुरक्षित सेक्स आलोचकहरु लाग्यो किनभने यो सत्य थियो अलग छानिएको थियो. यो कुनै एक एड्स थियो जसमा एक प्ले थियो, तर वर्ण यसलाई आफ्नो जीवन "परिवर्तन गर्न लाग्नुभएको थियो कसरी कुरा.
व्यक्तिहरूलाई गर्न "लघु एड्स, जनता ठूलो सहायता ".
"एड्स एउटा बिल्कुल दुःखद रोग छ. बारेमा एड्स 'ईश्वरीय प्रतिकार केही दयालु हुनुको तर्क बकवास छ ".
"एक बच्चा प्रेम दिनुहोस्, हास्य र शान्ति, छैन एड्स ".
"म आफ्नो पत्नी गर्न एड्स दिनुभयो र मात्र कुरा तिनीहरूले गरे चुम्बन थियो impotent थियो एक मानिस थाहा".
"तपाईं मान्छे न्याय यदि तपाईंले तिनीहरूलाई प्रेम गर्न कुनै समय".
"यो लुकाउन हामीलाई H.I.V./AIDS गर्न प्रचार गरौं र, मात्र तरिका बनाउन किनभने यो टीबी जस्तै सामान्य रोग जस्तै देखिने, क्यान्सर जस्तै, बाहिर आउन र कुनै किनभने H.I.V./AIDS को मृत्यु भएको छ भन्न सधैं छ, र मान्छे असाधारण कुरा रूपमा यो सन्दर्भमा बन्द हुनेछ ".
"एड्स बारेमा कुरा गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने रोग हो".
"म बाहिर एड्स मा वर्ष को एक जोडी को लागि कुनै एड्स काम जलाइएको र गरे. तपाईं बाहिर जाने र यसलाई प्राप्त गर्न "छ - म मान्छे अझै पनि कसैले तपाईं दिन सक्छ कि यो रोग रही थिए भनेर रिसाए!
"मेरो छोरा एड्स को मृत्यु भएको छ".
"किनभने एड्स मा शिक्षा को कमी को, विवेक, डर, आतंक, र झूट मलाई घेरिएको ".
"तपाईं साथीसँग अंगालो वा हातमिलाउबाट वा खानाको देखि एड्स प्राप्त गर्न सक्दैन".
"यो एड्स सामान राम्रो डरलाग्दो छ. म यसलाई प्राप्त छैन आशा ".
एड्स (प्राप्त प्रतिरक्षा कमी सिंड्रोम वा प्राप्त इम्यूनो सिंड्रोम) एचआईवी कारण (मानव इम्यूनो भाइरस) जो मानव शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली आक्रमण. रोग पहिलो वर्ष मा मान्यता थियो 1981. यो पहिलो मा एड्स को नाम द्वारा पहिचान गरिएको थियो 27th वर्ष मा जुलाई को 1982.
एचआईभी संक्रमण तिनीहरूले श्लेम लाग्एको झिल्ली मार्फत कहिल्यै सीधा सम्पर्क छ भने सजिलै एक व्यक्ति देखि अन्य प्रसारित गर्न सकिन्छ, शारीरिक तरल पदार्थ वा रगत. को पहिले अवधिमा, एचआईभी / एड्स संग मान्छे को लागि सामाजिक stigma धेरै भयो. अनुमान अनुसार, यो कि वरिपरि उल्लेख गरिएको छ 33 लाख मान्छे एचआईभी संक्रमित छन् र2लाख मान्छे हरेक वर्ष किनभने यो मृत्यु.
एचआईभी जो प्रतिरक्षा प्रणाली को टि-कक्षहरू एड्स रूपमा चिनिने रोग आक्रमण र गराउँछ भाइरस छ. यो रगत जस्तै मानव शरीर तरल पदार्थ पाइन्छ, वीर्य, योनी तरल पदार्थ, जो रगत रगत सार्ने काम जस्तै प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर अरूलाई पास गर्न सक्नुहुन्छ संक्रमित व्यक्तिको स्तन दूध, मौखिक सेक्स, गुदा सेक्स, योनी सेक्स वा दूषित सुई इंजेक्शन. यो गर्भवती महिला बच्चालाई पास गर्न सकिन्छ वितरण समयमा वा स्तनपान मार्फत.
यो उत्पत्ति भएको थियो 19th र 20th पश्चिम-केन्द्रिय अफ्रीका को क्षेत्र मा शताब्दीमा. वास्तवमा यसको लागि कुनै पनि कुनै उपचार छ तर हुन सक्छ रोग को पाठ्यक्रम केही उपचार गरेर तल lessens.
लक्षण र एचआईभी / एड्स को लक्षण
एचआईभी / एड्स संग एक व्यक्ति निम्न लक्षण र लक्षण छ:
तर, यो रोग धेरै अवस्थामा प्रारम्भिक लक्षण जाती नहुने हो जो एचआईभी भाइरस कारण प्रतिरक्षा प्रणाली हर्जाना समयमा जो धेरै वर्ष को लागि गायब छन्. यो संक्रमित व्यक्ति कहिल्यै यो अवधिमा कुनै पनि लक्षण महसुस र स्वस्थ देखिन्छ.
तर, एचआईभी संक्रमण को लेट चरणमा (भाइरस यो लडाइँ गर्न प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हुँदा) व्यक्ति एड्स संग रोग विकसित. देर चरण संक्रमण व्यक्ति निम्न लक्षण र लक्षण देखाउन सुरु:
ज्वरो (100f माथि)
पखाला (लगातार र क्रोनिक)
जिब्रोको र मुख मा सफेद स्थलहरू
Esophagitis (कम esophagus अस्तर को सुनिंनु)
Kaposi sarcoma, को cervix को क्यान्सर, फोक्सोमा, मलाशय, कलेजो, टाउको, घाँटी र प्रतिरक्षा प्रणाली को क्यान्सर (lymphomas).
मेनिनजाइटिस, encephalitis र परिधीय neuropathy
Toxoplasmosis (मस्तिष्क को संक्रमण)
त्यहाँ सहायता बारेमा समाजमा फैलाउन जुन केही मिथक हो. एड्स हात हल्लाउने मार्फत फैलाउन कहिल्यै, अंगालो, हाच्छिउं गर्नु, unbroken छाला स्पर्श वा एउटै शौचालय प्रयोग.
श्रेष्ठ कामको खोजी सुझाव र विचारै स्नातक विद्यार्थीहरूले
« मनसुन मौसममा पानी लग समस्या बारे सम्पादक गर्न पत्र
लोकप्रिय कलेज अन्तर्गत ड्यू (विश्वविद्यालय दिल्ली) »